ulwazi lokuthi umshini wokugaya irayisi usebenza kanjani-umshini wokunqoba ishebi
Ngokuvuselelwa okusheshayo kwemishini yezolimo, imishini ethintana nelayisi iya ngokuya ikhula phambili. Ngesikhathi esifanayo, izinhlobo eziningi ezintsha zemishini yokuhlunga irayisi sezikhulile, njenge Umshini wokugaya ama-rice, Umshini Wokupakisha Ilayisi, IPaddy De-cleaner, I-Rice Separator nokunye.
Izingxenye zomshini wokugaya irayisi zifaka isikrini selayisi, izimbobo, nesilinda esimhlophe. Ngenxa yokuxabana okuvame ukwenzeka phakathi kwalezi zingxenye nokusanhlamvu, izingxenye eziningi ezisele zigqokwa kalula ngezinga elithile. Ngokugqoka ngokweqile, isivuno kanye nekhwalithi yelayisi emhlophe kuzokwehla impela. Ngalesi sikhathi, kufanele ushintshe izingxenye ezisele. Uyacelwa ukuthi ubheke kwiNcwadi yoMsebenzisi ukuze uthole imininingwane ngokuhlanganisa nokufaka izingxenye ezithile.
1. Faka isigayo selayisi endaweni ebushelelezi ngaphambi kokuqala bese ubheka ukuthi zonke izingxenye ezihlobene zijwayelekile yini, ukuxhumana kuxhumekile futhi nebhande lokudlulisa lisesimweni esihle. Naka isimo sokugcotshwa kwazo zonke izingxenye. Kungemva kokuqinisekisa ukuthi lezi zingxenye ezingenhla zivamile lapho ungenza ukuthi umshini wokugaya irayisi uqale ukusebenza.